3 qalab aad u wanaagsan waa inaad ka ogaataa Lean Six Sigma | ITS
3 qalab aad u fiican waa inaad ka ogaataa Lean Six Sigma
Lean Six Sigma waa qorshe ah hababka iyo qalabka isbeddelka habka. Waxaa soo bandhigay Bill Smith intii uu ka shaqeynayay Motorola ee 1986. Jack Welch wuxuu muhiim u ahaa farsamada ganacsiga ee General Electric ee 1995. Maanta, waxaa loo isticmaalaa qayb ka mid ah qaybaha farsamoyaqaanka ee badan.
Six Sigma Cajiib ah
1. Six Sigma Training & Certification
Guudmarka Shahaadada Jaalaha ah
Mas'uuliyadaha ka mid ah Suunka Jaalaha ah
Tababar noocee ah ayuu bixiyaa
Tababarka Tababarka ee aasaasiga ah ee Six Sigma.
Saameynta Shahaadada Jaale Saar ee Shaqadaada
2. Lix Six Sigma Tababarka Cagaaran iyo Shahaadada
Guudmarka Shahaadada Green Belt
Kaalinta Sixgaaminta Six Sigma Green Belt
Tababarka Hoggaanka la soo doorto
Sida Barnaamijkeenu uqalmo Shaqadaada
3. Lean Six Sigma Tababar Iyo Shahaadada Baaskiilka
Guudmarka Shahaadada Baasboorka
Kaalinta Sixgaaminta Six Sigma Black Belt
Lix Qalab Dhaqan ee Sameeynta Sameeynta Hirgelinta
Baaxadda Lixda Lix Saacada Sigma Black Belt Certification
"Our Second to none" Adeegaha Khaaska ah ayaa la heli karaa si loo hubiyo in aqoontaada Waxbarashada Six Sigma Yellow Sumarka ah ee nala siisay ay tahay mid aad u fiican. Haddii aan ilaalineyno in diiwaankaagu uu kuu furan yahay marxalad walba ama aad asal ahaan qabtid su'aallo la xiriirta Six Sigma Yellow Belt Certification, nasasiinno ku ballanqaaday in Kooxdayada Daryeelka Macaamiishu ay awood u siinayaan inaad ka hesho inta ugu badan khibradaada internetka.
Isku diyaarinta Six Sigma Yellow Slim Barki ayaa siinaya fahamka istiraatiijiyadaha Six Sigma, cabbirkiisa, iyo hababka muhiimka ah ee isbedelka. Suunka caleemaha ayaa xaqiijinaya macluumaadka sida loola socdo Six Sigma qaabka isbeddelka abuurista iyo qaabdhismeedka qiimaha ku salaysan si uu si fiican ugu daboolo rabitaanka macaamiisha iyo bartilmaameedka ugu weyn ee ururadooda.
Aaladda Jaalaha ah waxay caadi ahaan leedahay barashada aasaasiga ah ee Six Sigma, hase yeeshee ma hogaaminayso kaligiis oo kali ah. Waxay si joogta ah u xilsaaran yihiin horumarinta khariidadaha geedi socodka si loo xoojiyo hawlaha Six Sigma. Jiilka Jaalaha ah wuxuu kobcayaa danta asxaabtiisa dhexe ama mawduuca maareynta (SME) ee hawlaha ama hawlaha. Waxaa intaa dheer, Sifaha Boorsada ayaa had iyo jeer u xilsaaran hawlaha isbedelka geedi socodka ee isticmaalaya PDCA (Qorshaha, Samaynta, Hubinta, Xeerka). PDCA, oo had iyo jeer lagu soo koobay sida Deming Wheel, waxay xoojinaysaa Boorsada Kaararka si ay u kala soocaan qaababka waxtar u leh isbedelka. Xirmooyinka Kuwani Cagaarka ah waxay u badantahay in ay si joogto ah u korodhaan heerka Cagaarka Cagaaran ama Qalabka Baaskiilka halkaasoo nidaam DMAIC ah loo isticmaalo si kor loogu qaado lacagta kaydka qarashka ee isticmaalka Xakamaynta Hantida Tirakoobka.
Diyaarinta lix Six Sigma Yellow Sodobka waxay siinaysaa hannaan loo adeegsado habraaca hawlaha iyo qalabka aasaasiga ah ee Six Sigma, oo siinaya shaqaalaha faham cad oo qeexan, oo awood u siinaya qof walba in uu siiyo caawimaad wax ku ool ah oo lagu fulinayo meeleynta guud ee ururada. Shahaadada Six Sigma Yellow Belt waxay sidoo kale horay u socotaa:
Ku filnaanshaha wakiillada qeybtooda sare ee Six Sigma
Kuwa iibsanaya ee Six Sigma
Meelaha shaqada ee maalinlaha ah (oo keena hoos u dhaca mudada socodka, tayada kor loogu qaado, iyo qashinka yar)
Sarkaalka Caleenta wuxuu uruuriyaa macluumaadka, ka qaybqaata hawlaha muhiimka ah ee fekerka iyo wuxuu ku kordhiyaa arimahooda iyaga u gaar ah habka baaritaanka. Ma aha si gaar ah u samee Sifaha Boortaqada ee muhiimka ah si ay u aqoonsadaan, shaashad iyo koontaroolidda cunno cunno oo waxtar leh ee nidaamkooda gaarka ah, si kastaba ha ahaatee waxaa lagu daraa si loo kobciyo xogtaas Black Belts iyo Green Belts iyagoo qaadanaya toogasho ku jira mashiino waaweyn.
Ogsoonow: Ma jiraan wax muhiim ah mashaariicdeena. Inta badan alaabooyinka aad baran lahayd Barnaamijka Jaalaha ah iyo Cagaarka ah waxaa lagu rikoodhaa Barnaamijka Shahaadada Black Belt. Wax kasta oo fahamsan oo doonaya inay si toos ah ugu doortaan Barnaamijka Cagaaran ama Baaskiilka ayaa lagu dhiirrigeliyay inay sidaa sameeyaan.
Lixda Sigma Online ee hababka waxbarashada ee Yellow Belt waxay la mid yihiin habka American Society for Quality (ASQ) ee shahaadada aqoonsiga Black Belts. Maadaama aad ka qalinjabinayso Six Sigma, kaliya ma saameyn doontid xirfadaada, walina noloshaada.
Barnaamijkeena waxbarasho ee Six Sigma Green Belt waa barnaamij isku dheelitiran oo ka mid ah Jaamicadda Mareykanka ee Tayada (ASQ) ee heerka shahaadada Green Belts. Ka mid ahaanshaha Six Sigma Online Green Belt, kaliya ma kobcin doontid xirfadaada, hase yeeshee bedel dhammaan qaybaha noloshaada. Isku qor maanta oo aad ku sii socotid si aad u heshid Six Sigma Green Belt shahaadadaada.
Isugeynta Six Sigma Green Belt waxay siinaysaa xubnaha inay kor u qaadaan fekerka fekerka ah ee muhiimka ah, iyada oo la xiiriirinayo DMAIC (Qeexida, Qiyaasida, Falanqaynta, Hagaajinta iyo Xakamaynta). Six Sigma Green Belt waxay xaqiijineysaa in qofka shaqaalaha ah uu u shaqeeyo sida saaxiib diyaar u ah gudaha gudahiisa gaarka ah ee ururka. Fikradaani waxay u saamaxdaa Green Belt in ay yareeyaan wax yar, hawo-qaadasho Sixty Sigma, oo aan u baahnayn in uu si buuxda u guto waajibaadka buuxa ee Black Belt si Sixinka Sigma dhamaanteed ururka.
Green Belt waxay leedahay laba qalab oo lagama maarmaan ah: si loo bilaabo, si looga caawiyo inay si hufan u gudbiso nidaamka Six Sigma, iyo labaad, si loo yareeyo isbeddel yar oo xudduudaha ah. Maaddaama dadwaynaha loo yaqaan 'Green Belts' ay qayb weyn oo ka mid ah lugaha ku samayn karaan xogta arrimaha bulshada iyo fulinta imtixaannada taageeraya Black Belt. Waxay yihiin khabiiro maalgashan 25% tamarta ay ka heleen lixda Sigma ee iyaga laftooda ama taageerada shirkadaha Black Belt. Iyada oo Tababarka Six Sigma Green Belt Training waxaad fahmi doontaa sida loo istcimaalo qayb ka mid ah Sixis Sigma xeeladaha fekerka ee muhiimka ah iyo qalab lagu qiyaasi karo si loogu daro guusha ururkaaga.
Hadday ku jiraan adeegyada aadanaha, sanduuqa, ururinta, dawladda, ama noocyada kale ee maamulka ama sheyada ku saleysan warshadaha ... Six Sigma Green Belt Training waa mid ku haboon qofkasta oo rajeynaya in uu ka faa'iideysto xirfaddooda. Understudies waxay ogaan doontaa sida loo isticmaalo farsamooyinka la qiyaasi karo ee ganacsiga u diyaariyaan isbedel sida:
Maareynta Mashruuca Isticmaalka DMAIC iyo DMADV
Ku adkee "Qeexida" iyo "Cabbiraadda" Wajiyada DMAIC
Habraaca Habdhaqanka Habdhaqanka iyo Nidaamka Qiyaasta
Ogsoonow: Ma jiraan wax shuruud ah oo ah mashaariicdeena. Qaybta ugu weyn ee alaabta aad ku baran lahayd Barnaamijka Jaalaha ah iyo Cagaarka Cagaaran waxaa lagu dhejiyaa Barnaamijka Shahaadada Black Belt. Wax kasta oo fahamsan oo doonaya inay si toos ah ugu doortaan Barnaamijka Cagaaran ama Baaskiilka ayaa lagu dhiirrigeliyay inay sidaa sameeyaan. Six Sigma Online Six Sigma Online Tababarka Waxbarashada Cagaaran iyo Barnaamijka Shahaadada Sayniska ee Isku-dheelitirnaanta wuxuu u dhigmaa mid ka mid ah Jaamicadda Mareykanka ee Tayada (ASQ) ee heerka shahaadada Green Belts. Qalinjabinta Tababarka Six Sigma Green Belt, kaliya ma saameyn kartid xirfadaada, walina noloshaada.
Barnaamijkeena Waxbarashada Six Sigma Black Belt waa barnaamij isku mid ah oo ka mid ah Jaamicadda Mareykanka ee Tayada (ASQ) ee heerka shahaadada Black Belts. Iyada oo Lagu Sameeyo Six Sigma Black Belt Certification, kaliya ma saameyn kartid xirfadlahaaga, weli noloshaada. Six Sigma Online Black Belt Certification waxay bedeli kartaa noloshaada.
Tababarkeena Six Sigma Black Belt wuxuu siinayaa macluumaad fara badan oo ah Six Sigma oo ah qaababka fikradaha iyo heerarka (tirinta qaababka taageerada iyo qalabka). Black Belt waxay xaqiijinaysaa fahamka maamulka kooxda, horumarka kooxeed, iyo si wax ku ool ah uga soo kabashada shaqsiyaadka leh qaybo iyo waajibaadyo. Tababarka Kuurtu wuxuu abuuraa fahan dhamaystiran oo ah muuqaalka DMAIC sida kudhaca heerka Six Sigma, barashada aasaasiga ah ee fikradaha khatarta ah, iyo awoodaha si ay si dhakhso ah u kala saaraan "jimicsi aan ku jirin" jimicsi.
Black Baaskiilku wuxuu xoogga saarayaa fulinta jilidda, inkastoo Champions League iyo Master Black Belts ay diirada saaraan garashada kartida iyo awooda Six Sigma. Diyaaradaheena Six Sigma Black Belt waxay diyaarinaysaa dadkan qalabka ay haystaan ​​si ay u helaan Sixis Sigma Black Belt, taas oo lagama maarmaan u ah inay ka caawiso inay ka baxaan qaybtooda iyagoo ah madaxa ugu sarreeya barnaamijka lixaad ee ururkooda. Six Sigma Black Belt oo diyaarinaya waxay muujineysaa sida loo xakameynayo Six Sigma shirkadaha u oggolaanaya in ay si toos ah u gutaan waajibaadka shaqadooda gudahooda.
Suumanka badanaa ee madow waxay qabsan doonaan booskan labo sano oo buuxa oo buuxa oo dabadeedna dib ugu noqda waajibaadkooda caadiga ah ee shaqada kadib. Waxay lataliye, abuuraan, hoggaamiyaan isla markiiba maamulka iyo shaqaalaha si ay u gutaan ujeedooyinkooda. Waxaa looga baahan yahay inay keenaan shaqooyin lacag kayd ah oo ballan-joojin ah oo ku saabsan $ 100,000 - $ 250,000.
Ha ahaato adeegyo bani'aadamnimo, maalgelin, soo-ururin, dawlad, ama nooc kasta oo ah maamulka ama sheyga ku salaysan warshadaha ... Six Sigma Black Belt Training waa mid ku haboon qofkasta oo rajeynaya inuu helo xirfada ugu badan. Halkan waxaa ku yaal laba waxyaalood oo kaliya oo aad ka heli karto suunka madow ee diyaarinaya:
Ganacsi udub dhexaad u ah macaamiisha
Cabbiraadaha loo dejiyay
Tilmaamidda kooxo firfircoon oo wax ku ool ah
Alaabtaada Six Sigma Black Belt waxay damaanad qaadi doontaa inaad diyaar u tahay:
La shaqee oo faham shuruudaha macmiilka
Kooxaha musqusha oo leh taageero joogto ah iyo dadaal
Sii jawaab celinta maamulka